Rabshadahii ka bilwaaday Dilka Fanaanka ee Caasimada Etoobiya oo sii Xoogeystay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Rabshadahii ka bilwaaday Dilka Fanaanka ee Caasimada Etoobiya oo sii...
Rabshadahii ka bilwaaday Dilka Fanaanka ee Caasimada Etoobiya oo sii Xoogeystay
Magaalada Adis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya waxaa ka dhacay maanta banaan baxyo xoogan oo rabshado wata, waxaana banaan baxyadan ka dhasheen dil xalay Adis Ababa loogu geestay fanaan caan ah oo u dhashay Qowmiyada Oromada.
Dibad baxayaal u badan dhalinyaro ka careesan dilka fanaan Haacaaluu Hundeessaa ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Adis Ababa kuwaa oo jidadka qaar xiray kuna gubayay taayaro.
Wadooyinka magaalada Adis Ababa oo ahaa kuwa mashquul badan ayaa maanta laga dareemayaa xaalad kuwii hore ka duwan, waxaana inta badan xiran goobaha ganacsiga iyadoona magaalada dhax socdaan dhalinyaro dibad baxyo dhigaya.
Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa ka tacsiyadeeyay dilka Fanaanka kasoo jeeda Qowmiyada Oromada, waxa uuna Abiy ku tilmaamay fanaanka in uu ahaa mid cajiib ah, waxa uuna balan qaaday in baaritaano lagu sameyn doono dilkan.
Magaalada Adis Ababa waxaa lagu daadiyay ciidamo badan oo amaanka xaqiijinaya, waxaana dowlada jartay Internetka dalkaasi si rabshadaha socda u horseedin in rabshadaha sii xoogeestaan.
Fanaanka la toogtay ee Haacaaluu Hundeessaa ayaa ku caan baxay heesaha kicinta gaar ahaan intii ay socdeen dibad baxyadii isbadalka ka dhaliyay dalka Itoobiya, waxaana fanaankan taageero badan ku lahaa Qowmiyada uu kasoo jeedo ee Oromada.
Previous articleDowlada Federaalka oo Daah Furay maanta Goobe muhiim u ah Dalka
Next articleCudurka Korona: Fayras kale oo ka dillaacay Shiinaha oo laga cabsi qabo inuu dunida ku faafo
Sxbbadeydi #Nabadiyonolol waxan arkaa iney inta badan u ololeynayaan muddo kordhin...